China Agricultural Tractor Hub Manufacture and Factory |Yuanfang
Matarekita ekurima ndiwo ane simba guru rekurima.Vanofanira kushanda zvakasimba kwenguva yakareba pasi pemamiriro akaipa emigwagwa uye kutyaira vachidzoka nekudzoka munzvimbo dzakasiyana.
Wekishopu iri kure nenzvimbo yekuvhiya.Naizvozvo, zvinodikanwa kutyaira nekukurumidza uye nyore kutendeuka.Iyo hubhu yetirakita inofanirwa kutarisisa kuchengetedzeka, kuwanikwa uye kusapfeka.
Zvigadzirwa zvekambani zvemavhiri hub zvinogadzirwa neakakosha vhiri simbi ine yakagadzikana chigadzirwa mhando.Iyo kambani nzira yekugadzira marimu yakasarudzika uye ine.yakazvigadzira uye yakagadzira rim imwe-nguva yekutenderedza kugadzira muchina, CNC welding muchina uye imwe yakakosha simbi yekugadzira mhete inodarika makumi mashanu seti, uye ine mabasa maviri e electrophoresis uye poda yekupfapfaidza simbi mhete yekugadzira tambo yekugadzira.
Matarekita ekurima ndiwo ane simba guru rekurima.Vanofanira kushanda zvakasimba kwenguva yakareba pasi pemamiriro akaipa emigwagwa uye kutyaira vachidzoka nekudzoka munzvimbo dzakasiyana.Wekishopu iri kure nenzvimbo yekuvhiya.Naizvozvo, zvinodikanwa kutyaira nekukurumidza uye nyore kutendeuka.Iyo hubhu yetirakita inofanirwa kutarisisa kuchengetedzeka, kuwanikwa uye kusapfeka.
Zvigadzirwa zvekambani zvemavhiri hub zvinogadzirwa neakakosha vhiri simbi ine yakagadzikana chigadzirwa mhando.Iyo kambani nzira yekugadzira marimu yakasarudzika uye ine self yakagadziridzwa uye yakagadzirwa rimu imwe-nguva yekutenderedza kugadzira muchina, CNC welding muchina uye imwe yakakosha simbi yekugadzira mhete michina inodarika makumi mashanu seti, uye ine mabasa maviri e electrophoresis uye poda kupfapfaidza.simbi mhete unwisa kugadzirwa mutsara.
Ukobvu hwekutaura hunogona kusvika 16cm
Hunhu uye kunaka
Special vhiri simbi, otomatiki kugadzirwa mutsetse
Nhamba YeScrew Holes
Bolt welded rutsigiro
Iyo kambani yakashongedzerwa nehunyanzvi mushure mekutengesa sevhisi timu kuti ivandudze kubva nyore mushure mekutengesa sevhisi kune pre-kutengesa kutungamira, uye kupinza iyo sevhisi pfungwa mumoyo yemushandi wega wega;Strategic kubatirana nevagadziri vanotsigira kuwana ruzivo kugovana, shanduko nenguva uye kusimudzira zvigadzirwa, uye kugadzirisa kukwikwidza kwezvigadzirwa nemichina yekurima muindasitiri imwe chete;Chigadzirwa mushure mekutengesa sevhisi, chigadzirwa R & D, kugona kwekugadzira uye mhando yechigadzirwa zvakazivikanwa zvakanyanya nevanogadzira injini.Vatengesi vemubatanidzwa vanosanganisira Dongfeng Agricultural Machinery Co., Ltd.Mazita ekuremekedza e "akanakisa mutengesi" uye "kugadzira akanakisa mutengesi" wemichina yekurima uye mamwe mafekitori anotambira.
Vatungamiriri vekambani, sevamiriri veDongfeng vatengesi vakanaka, vakataura pachikuva
Kunyanya kutarisisa kuchabhadharwa kana uchishanda mavhiri, kunyanya mukuita kwekushandisa kwakachengeteka, kuisirwa, disassembly uye kugadzirisa.Vashandisi vanofanirwa kushanda zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo zvemaindasitiri akasiyana, nyika nepasirese mirau uye zvimiro.
Usati washanda, nyatso tarisa mavhiri kune zvinotevera zvinogona kukanganisa:
1. rimu rinotsemuka
2. chimiro chekutaura chinobata kumeso chiri asymmetric
3. deformation yegomba rebhaudhi kana tsigiro nekuda kwekukuvadza uye kunyura kwakanyanya
4. ngura yakawandisa kana kupfeka
5. rimu remavhiri akawanda rakakuvadzwa
Mumamiriro ezvinhu ari pamusoro apa, zvinorambidzwa kushandisa mavhiri uye zvikamu.Zvikamu zvakakuvadzwa zvichatsiviwa nenguva.
Pakuunganidza vhiri, ita shuwa kuti nzvimbo dzese dzakachena uye hadzina ngura uye sediment.Usavhiringidze zvikamu zvezvakasiyana zvakatemwa, zvikasadaro torque kusaenzana, kuputika kwepamusoro, mabhoti mabhoti uye studs zvichakuvadzwa.
Pakuunganidza kana kubvisa mavhiri, vashandi vehunyanzvi vanofanirwa kushanda vari pasi pemichina yehunyanzvi.Zvinonyanya kukosha kusarudza mavhiri akakodzera uye matai anoenderana zvinoenderana nemitemo yenyika uye zvinodiwa nemugadziri.Kufananidza kusiri iko kunogona kukonzera kukanganisa kana kukanganisa mavhiri nematayi.Paunenge uchibvisa vhiri kubva mumotokari, vhiri rinofanira kunge rakasvibiswa zvachose.
Dzivisa kumira pamberi pematayi akawanda panguva yegungano.Zvikamu zvakakuvadzwa zvinogona kubuda uye kukuvadza vanhu.
Mavhiri akagadziridzwa anorambidzwa, kunyanya zvikamu zve welded, mabhoti maburi, maburi epakati uye zvitsigiro zvakagadziriswa.
Zvakapfuura: Mhangura Phosphorus Silver Welding Ring
Zvinotevera: Compressor Piston
Trailer Supply Trailer Hub
Trailer Supply Trailer Hub Kit
Trailer Trailer Hub